I-Recipe I-saladi yemifuno ngeoli yomsedare
Isaladi yemifuno emifino kunye neoli yemisedare Iifama zemifino ekhanyayo kunye nokongezwa kwecandelo leprotheni - inkukhu okanye amaqanda esinqabileyo, ushizi weentlobo ezahlukeneyo - ziqheleke kakhulu. Ndiyakuthanda ukupheka i-Salads enjalo, zifana nazo zonke ezidumileyo "uKesari", zihluke kwiimpawu ezithile, kuxhomekeke kwiisethi zeemveliso ezikhoyo kunye nomnqweno wompheki. Ukugqoka isaladi kwenziwa kwinqanaba leoli, bhetele kuneyokuqala yokuxineka, i-flaxseed, umnquma, i-rapeseed, i-sunflower. Kuyathakazelisa kakhulu ukuzama, njengoko ioli nganye inomdla wayo kunye nenkohlakalo. Kwisiza sifunde malunga neoli yomsedare - eneneni, yavela kuthengiswa, ine-smell of strong pine nut, izitya nazo ziqhumisa kakhulu, kwaye ke, zincedo.
Isaladi ehlaza emagqabi amathathu
Iklabishi i-Peking 50 g
Ikhukhamba 50 g
I-celery ifana ne-30 g
Umgubo we-rye othoyiweyo 5 g
I-soy sauce 30 ml
Ijisi le-lemon 30 ml
Inyathelo 1 Ukulungiselela isaladi, kufuneka uthathe amaqabunga esaladi eluhlaza, i-Peking iklabishi, ikhukhamba, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-apple eluhlaza, i-cheese ekhuni, abaqhiki.
Inyathelo 2 Ukuze isaladi egqoke udinga i-soy sauce, i-cedar oil, ijusi lemon.
Inyathelo 3 Amaqabunga e-Lettuce anqwenguliweyo okanye anqunywe (ngokukhethekileyo kunye neelayi le-ceramic) kwiziqhekeza ezi-4-6.
Isinyathelo 4 Beka i-lettuce ecocekileyo kwi-plate enkulu.
Inyathelo 5 Hlaba iklabishi yaseTshayina ngamacwecwe amancinci.
Isinyathelo 6 Beka isilayidi kwiifishi zesaladi.
Inyathelo 7 Ikhukhamba inqunywe kwiikhabhi okanye iikhabhi, izivuthu ze-apula (ngoncedo lwezityalo zemifuno), zifefe ngejisi lemon.
Isinyathelo 8 Faka i-aple shavings kwiklabishi.
Isinyathelo 9 Kusuka ngaphezulu - iincinci ezincinane zekhukhamba kunye neselmatory.
Inyathelo le-10 I-Cheese iphinda isetyenziswe emaphethelweni, isasaza i-shavings phezu komgangatho wesaladi.
Inyathelo 11 Hlanganisa izithako zokugqoka isaladi.
Isinyathelo 12 Qinisekisa kakuhle.
Inyathelo 13 Ukuzalisa isaladi ngaphambi kokukhonza, i-crunches ingahanjiswa ngokwahlukileyo.
Iklabishi ekhethiwe eTransylvanian
Iklabishi kunye nomzimba kwi-multivariate
Mini pizza kunye anyanisi
Kutheni uphupha umtshato?
Ikhefu ye Orange
Iparele yeParele nge-sauce
Imaski yobuso efanelekileyo kakhulu
Ungaziphoqa njani ukuba uhambe ngokutya
I-Horoscope yowesifazane wase-Aries ngo-Agasti 2016